महिनावारीका बेला के खाने के नखाने ? | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ 45
महिनावारीको अवस्थामा हुने सामान्यदेखि अधिक दुखाइबारे महिला जानकार छन् । यो बेलामा ढाड, पेट, शरीर दुख्ने मात्र नभई कसैलाई त रिँगटा चल्ने बान्ता हुने समस्या समेत हुने गर्छ । दुखाई कम गर्ने औषधि नखाई हिँडडुल गर्नै नसक्ने समस्या समेत हुन्छ । त्यही कारणले महिनावारीको अवस्थामा कस्ता खानेकुरा खान हुन्छ र कस्ता खानु हुँदैन भन्नेबारे पनि धेरैलाई अन्योल हुने गरेको छ ।
प्राकृतिक रूपमा नै महिनावारीको अवस्थामा हुने दुखाई कम गर्न खानपानमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. स्वातीकुमारी पाण्डेको सुझाव छ । उनका अनुसार महिनावारीको अवस्थामा शरीरलाई फाइदा पु¥याउने र प्राकृतिक रूपमा नै दुखाइलाई कम गर्ने खानेकुराहरू हुन् :-
केरामा प्रशस्त मात्रामा फाइवर हुने भएकोले केरा खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसका अतिरिक्त केरामा म्याग्नेसियम पनि पर्याप्त पाइन्छ जसले दुखाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।
महिनावारीको समयमा अमिलो खानु हुँदैन रक्तस्राव बढी हुन्छ भन्ने भ्रम रहिआएको छ । तर यसमा कुनै सत्यता छैन । कागतीमा पाइने ‘भिटामिन सी’ ले दुखाई कम गर्न मद्दत गर्नुको साथै शरीरमा लौहतत्व अर्थात् आइरनको मात्रा बढाउँछ । महिनावारीमा महिलाको शरीरमा आइरनको कमी हुने भएकाले कागती खानु अति फाइदाजनक हुन्छ ।
सुन्तला र कागतीको धेरै गुण आपसमा मिल्छन् । सुन्तलामा पनि भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । जसले महिनावारीको समयमा हुने पिडालाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।
खरबुजा पनि महिनावारीको समयमा खानु उपयुक्त हुन्छ । खरबुजामा पाइने भिटामिन र खनिजले दुखाई कम हुनुको साथै आनन्दको अनुभूति गराउँछ ।
अदुवा राखेको चिया
महिनावारीको बेला थोरै चिनी राखेको वा चिनी नै नराखेको तर अदुवा राखेको चिया पिउनु राम्रो हुन्छ । यसले दुखाई कम गर्न मद्दत त गर्छ नै त्यससँगै बान्ता हुने, टाउको दुखाई पनि कम गर्छ । त्यस्तै क्यामोमाइल चिया पनि पिउन सकिन्छ ।
महिनावारीको अवस्थामा दूध हालेको चिया खानु हुँदैन । दूध राखेको चियाले ग्यास्ट्रिक हुन्छ र झन् धेरै पेट दुख्छ । त्यस्तै कफीमा हुने तत्त्व क्याफिनले पनि महिनावारीमा हुने दुखाइलाई झन् बढाउने भएकाले कफी पिउनु हुँदैन । त्यस्तै क्यानमा राखिएको खानेकुरा पनि खानु हुँदैन । अरू बेलामा स्वास्थ्यबद्र्धक मानिने गेडागुडी महिनावारीको समयमा भने नखाएकै राम्रो हुन्छ । चिल्लो, पिरो र दूधजन्य पदार्थ सकेसम्म नखाएको राम्रो हुन्छ । मकालु खबर बाट सभार